Bit By Bit - agba nwere - 4.4.3 usoro
Nwere tụọ ihe merenụ. Usoro ịkọwa ihe mere na otú o mere.
Echiche isi nke atọ maka ịgafe karịa nyocha dị mfe bụ usoro . Ebumnuche na-agwa anyị ihe mere maọbụ otú ọgwụgwọ si mee ka ọ pụta ìhè. A na-akpọkwa usoro nyocha usoro a na-achọ maka mgbanwe dị iche iche ma ọ bụ ịmegharị mgbanwe . Ọ bụ ezie na nyocha ndị dị mma maka ịme atụmatụ nrụpụta ahụ, a naghị emekarị ha iji kpughee usoro. Nchọpụta nke Digital nwere ike inyere anyị aka ịmata usoro n'ime ụzọ abụọ: (1) ha na-enyere anyị aka ịchọta usoro data ọzọ na (2) ha na-enyere anyị aka ịnwale ọtụtụ ọgwụgwọ ndị metụtara ya.
Ebe ọ bụ na usoro dị iche iche na-esi ike ịkọwapụta (Hedström and Ylikoski 2010) , m ga-amalite site na ihe atụ dị mfe: limes na scurvy (Gerber and Green 2012) . Na narị afọ nke iri na asatọ, ndị dọkịta nwere ezi uche nke ọma na mgbe ndị ọrụ ụgbọ mmiri na-eri nri, ha anaghị enwe isi. Scurvy bụ ọrịa dị egwu, ya mere nke a bụ ihe dị ike. Ma ndị dọkịta a amaghị ihe mere limes ji egbochi ịkwapụ. Ọ bụ na 1932, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ narị afọ abụọ, ndị ọkà mmụta sayensị nwere ike igosi na vitamin C bụ ihe mere na wayo gbochiri scurvy (Carpenter 1988, 191) . N'okwu a, vitamin C bụ usoro nke limes na-egbochi scurvy (nọmba 4.10). N'ezie, ịchọta usoro ahụ dịkwa ezigbo mkpa na sayensị-ọtụtụ ndị ọkà mmụta sayensị gbasara ịghọta ihe mere ihe ji eme. Ịmata usoro dị ezigbo mkpa. Ozugbo anyị ghọtara ihe kpatara ọgwụgwọ ji arụ ọrụ, anyị nwere ike ịmepụta ọgwụgwọ ọhụrụ nke na-arụ ọrụ ka mma.
Onu ogugu nke 4.10: Limes gbochie nchachapu na usoro bu vitamin C.
N'ụzọ dị mwute, usoro mmepe dị nnọọ ike. N'adịghị ka limes na scurvy, n'ọtụtụ nnọkọ ntụrụndụ, ọgwụgwọ nwere ike ịrụ ọrụ site n'ọtụtụ ụzọ. Otú ọ dị, n'ihe gbasara mmekọrịta mmadụ na ike ya, ndị nchọpụta agbalịwo ịmepụta usoro site n'ịchịkọta usoro data na nyocha ndị metụtara ya.
Otu ụzọ iji nwalee usoro ndị ga-ekwe omume bụ site na ikpokọta usoro data banyere otu esi agwọ ọrịa a ga-esi emetụta usoro omume. Dịka ọmụmaatụ, cheta na Allcott (2011) gosiri na Ụlọ Ụlọ Ọrụ Ike na-eme ka ndị mmadụ belata eletrik ha. Ma, olee otú akụkọ ndị a si gbasaa ikike eletrik? Kedu usoro ndị a? N'ọmụmụ ihe na-esote, Allcott and Rogers (2014) so na ụlọ ọrụ ike, na, site na mmemme mmefu ego, enwetawo ihe ọmụma banyere ndị na-azụ ahịa na-eme ka ngwá ọrụ ha dịkwuo mma iji mekwuo ngwa ngwa. Allcott and Rogers (2014) chọpụtara na ọtụtụ ndị mmadụ na-anata Ụlọ Energy Report na-akwalite ngwa ngwa ha. Ma ọdịiche a dị ntakịrị nke na ọ nwere ike ịkọ nanị 2% nke ọnụ ala n'iji ike mee ihe n'ezinụlọ ndị a na-emeso. N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, imelite ngwa ngwa abụghị usoro kachasị nke Ụlọ Nche Energy Home belata ọkụ eletrik.
Ụzọ nke abụọ ị ga-esi na-amụ ihe bụ iji nweta nyocha dị iche iche dị iche iche nke ọgwụgwọ ahụ. Dị ka ihe atụ, na nyocha nke Schultz et al. (2007) na nyocha niile nke Ụlọ Energy Energy ndị ọzọ, ndị ọkachamara na-enye ọgwụgwọ nke nwere akụkụ abụọ (1) ntụziaka banyere nchekwa ume na (2) ozi banyere ike ha na-eji ndị enyi ha (nọmba 4.6). Ya mere, ọ ga-ekwe omume na ndụmọdụ nchekwa ahụ bụ ihe kpatara mgbanwe, ọ bụghị ozi ndị ọgbọ. Iji chọpụta na ọ ga - abụrịrị na ndụmọdụ ahụ zuru ezu, Ferraro, Miranda, and Price (2011) sooro ụlọ ọrụ mmiri dị nso Atlanta, Georgia, ma gbasaa nnwale yiri ya maka nchekwa mmiri nke gụnyere ihe dị ka 100,000 ezinụlọ. E nwere ọnọdụ anọ:
otu ndị natara ndụmọdụ maka ịchekwa mmiri
otu ndị natara ndụmọdụ maka ịchekwa mmiri tinyere ịchọta omume iji zọpụta mmiri
otu ndị natara ndụmọdụ maka ịchekwa mmiri tinyere ihe omume na-achọ ịzọpụta mmiri tinyere ozi gbasara iji mmiri mee ihe maka ndị ọgbọ ha
Ndị nchọpụta ahụ chọpụtara na ntinye ọgwụgwọ naanị enweghi mmetụta na ojiji mmiri dị mkpirikpi (otu afọ), ọkara (afọ abụọ), na ogologo (afọ atọ) okwu. Atụmatụ ahụ tinyere mkpesa na-eme ka ndị na-eme ya mee ka ọnụ ọgụgụ mmiri ghara ịdị, kama ọ bụ naanị n'oge dị mkpirikpi. N'ikpeazụ, ntụziaka ndị ọzọ na-adọrọ mmasị na nlekọta ndị nlekọta nke ndị ọgbọ mere ka emebiewanye ojiji dị mkpirikpi, ọkara, na ogologo oge (nọmba 4.11). Ihe ndị a dị iche iche na nyocha ndị a na-ejighị n'aka bụ ụzọ dị mma iji chọpụta akụkụ nke ọgwụgwọ-ma ọ bụ nke akụkụ ahụ-bụ ndị na-akpata mmetụta (Gerber and Green 2012, sec. 10.6) . Dịka ọmụmaatụ, nnwale nke Ferraro na ndị ọrụ ibe anyị na-egosi anyị na ntụziaka maka nchekwa mmiri anaghị ezuru iji belata mmiri.
Nyocha 4.11: Ihe si na Ferraro, Miranda, and Price (2011) . A zitere ọgwụ na May 21, 2007, a chọpụtakwara mmetụta ndị a n'oge okpomọkụ nke 2007, 2008, na 2009. Site n'ịgbaghasị ọgwụgwọ ahụ, ndị nnyocha ahụ nwere olileanya na ha ga-enwe echiche dị mma nke usoro. Nanị usoro ọgwụgwọ ahụ enwechaghị mmetụta na mkpirikpi (otu afọ), ọkara (afọ abụọ), na ogologo (afọ atọ) okwu. Atụmatụ ahụ gụnyere ịrịọ mkpesa na-eme ka ndị na-eme ya mee ka ọnụ ọgụgụ mmiri ghara ịdị, ma ọ bụ naanị n'oge dị mkpirikpi. Ndụmọdụ ahụ gbakwunyere ya na ihe ọmụma nke ndị ọgbọ mere ka ndị na-eso ụzọ belata mmiri iji mee ihe na obere, ọkara, na ogologo oge. Ogwe osisi vertical na-atụle oge obi ike. Lee Bernedo, Ferraro, and Price (2014) maka ihe ọmụmụ ihe. E si na Ferraro, Miranda, and Price (2011) , tebụl 1.
Dị ka ọ dị, otu ga - agafe karịa ịmepụta ihe dị iche iche (ntụziaka, ntụziaka tinyere mkpesa; ntụziaka na mkpesa tinyere ozi ndị ọgbọ) iji mee ihe zuru ezu na-eme ememe-nke a na-akpọkarị \_(2^k\_) A na-anwale ihe atọ (tebụl 4.1). Site na ịnwale ụdị ihe ọ bụla nwere ike ịme, ndị na-eme nchọpụta nwere ike nyochaa mmetụta nke ihe ọ bụla dị iche iche na iche. Dịka ọmụmaatụ, nnwale nke Ferraro na ndị ọrụ ibe ya adịghị ekpughe ma ọ bụrụ na onye ọhụụ na-atụle naanị ya gaara ezu iji duzie mgbanwe omume ogologo oge. N'oge gara aga, atụmatụ ndị a zuru ezu na-esiri ike ịbanye n'ihi na ha chọrọ ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke ndị na-eme nchọpụta na ha chọrọ ka ndị na-eme nnyocha nwee ike ịchịkwa kpọmkwem ma na-enye ọtụtụ ọgwụgwọ. Ma, n'ọnọdụ ụfọdụ, afọ dijitalụ na-ewepụ ihe mgbochi logistical ndị a.
Isiokwu 4.1: Ihe Nlereanya nke Ọgwụ na Nzube Zuru Ezu na Atọ Atọ: Atụmatụ, Mkpesa, na Ozi Ndị Ọgbọ
4 Ozi ndị ọgbọ
5 Atụmatụ + mkpesa
6 Atụmatụ + ozi ndị ọgbọ
7 Ịkpọọ + ozi ndị ọgbọ
8 Atụmatụ + ịrịọ + ozi ndị ọgbọ
Na nchịkọta, usoro-ụzọ nke ọgwụgwọ nwere mmetụta-dị oke mkpa. Nyocha nke afọ ole na ole nwere ike inyere ndị nchọpụta aka ịmụta banyere usoro site na (1) ichikota data usoro na (2) na-enyere atụmatụ zuru ezu. Usoro ndị a na-atụ aro ndị a nwere ike ịnwale ozugbo site na nnyocha ndị e mere iji nwalee usoro (Ludwig, Kling, and Mullainathan 2011; Imai, Tingley, and Yamamoto 2013; Pirlott and MacKinnon 2016) .
Na mkpokọta, njirimara atọ a-nkwado, nchịkọta nke mmetụta ọgwụgwọ, na usoro-na-enye usoro dị ike nke echiche maka ịmepụta na ịkọwa nyocha. Echiche ndị a na-enyere ndị nchọpụta aka ịgafe nyocha ndị dị mfe banyere ihe "ọrụ" iji nweta nyocha ndị bara uru nke nwere njikọ na tiori, na-ekpughe ebe na ihe mere ọgwụgwọ ji arụ ọrụ, nke ahụ pụkwara inyere ndị nchọpụta aka nhazi ọgwụgwọ dị irè karị. N'iburu ihe omuma a banyere ule, enwere m ike ichota uzo i nwere ike isi mee ka ihe gi mere.